မြန်မာ့ထိုင်မသိမ်းအင်္ကျီကို ဖျက်စီးပစ်တဲ့ ဆယ်လီကို ပြင်းထန်စွာ ရံှု့ချလိုက်တဲ့ ကောင်းကျော် – XB Media Myanmar
မြန်မာ့ထိုင်မသိမ်းအင်္ကျီကို ဖျက်စီးပစ်တဲ့ ဆယ်လီကို ပြင်းထန်စွာ ရံှု့ချလိုက်တဲ့ ကောင်းကျော်
August 26, 2019 Bestie_Author
လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်တွေကတည်းက ဒီနေ့ထိတိုင် ပရိသတ်တွေကို အပြုံးအပျော်တွေ ဖန်တီးပေးနိုင်တဲ့ လူရွှင်တော် ကောင်းကျော်ကတော့ ပရဟိတအလုပ်တွေ၊ အနုပညာအလုပ်တွေလုပ်ရင်း ဘဝကို ပျော်ရွှင်အေးချမ်းစွာ ဖြတ်သန်းနေသူတစ်ဦးပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ လတ်တလောမှာတော့ ကောင်းကျော်က မြန်မာတွေ အမြတ်တနိုး တန်ဖိုးထား ဝတ်ဆင်ကြတဲ့ ရိုးရာယဉ်ကျေးမှုဖြစ်တဲ့ ထိုင်မသိမ်း အကျီၤကို ဖျက်စီးပစ်တယ်ဆိုပြီး ဆယ်လီတစ်ဦးကို ပြင်းထန်စွာ ရံှု့ချလိုက်တာ တွေ့ရပါတယ်။ ဆန်းသစ်တီထွင်ချင်ရင်လည်း လူမျိုးနဲ့ ရိုးရာယဉ်ကျေးမှုကို မထိခိုက်တဲ့ ဆန်းသစ်မှုမျိုးကို ရှာဖွေပါဆိုတဲ့ ကောင်းကျော်ရဲ့စကားလုံးတွေကတော့ တန်ဖိုးရှိလွန်းလှပါတယ်နော်။
ချစ်ပရိသတ်တွေအတွက် အွန်လိုင်းပေါ်မှာ နာမည်ကြီးနေတဲ့ ဆယ်လီတစ်ဦးရဲ့ဝတ်စားဆင်ယင်မှုနဲ့ပတ်သတ်ပြီး ပြင်းထန်စွာ ရှုံ့ချလိုက်တဲ့ လူရွှင်တော် ကောင်းကျော်ရဲ့အကြောင်းကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်နော်။
ကောင်းကျော်ကတော့ “ပြင်းထန်စွာ ကန့်ကွက် ရှုံ့ချပါသည်။ ငါ့ညီ ???? ရေ မင်းဝတ်ထားတဲ့ ဒီဇိုင်းကိုလဲပြန်ကြည့်ပါဦးကွာ တို့မြန်မာလူမျိုးတွေရဲ့ ရိုးရာ ယဉ်ကျေးမှု အမှတ်အသား ထိုင်မသိမ်း အကျီ ၤကို အခုလိုကြီး ဖျက်စီးပြစ်တဲ့ မင်းဟာ မြန်မာစစ်စစ်တစ်ယောက်ရောဟုတ်ပါရဲ့လား လို့မေးပါရစေ ???? ဆန်းသစ်တီထွင်ချင်ရင်လဲ လူမျိုးနဲ့ရိုးရာယဉ်ကျေးမှုကို မထိခိုက် မနစ်နာ စေတဲ့ ဆန်သစ်မှုမျိုးကို ရှာဖွေပါလားကွာ ။ အခုတော့ မင်းလုပ်ပုံကိုကြည့်ပြီး ရင်ထဲမှာ မြန်မာလူမျိုးတစ်ယောက်အနေနဲ့ ရင်ထဲမှာစိတ်မကောင်းဒေါသဖြစ်လွန်းလို့ ဒီစာကိုထရေးမိတာဘဲ ။ အနုပညာသမား လို့ မင်းကိုယ်မင်းခံယူထားတာ ဆိုရင်တော့ အခုလို့ လူမျိုးနဲ့ရိုးရာယဉ်ကျေးမှုကို ထိခိုက်သွားစေမဲ့ပေါက်လွှတ်ပဲစား အောက်တန်းဆန်ဆန် လုပ်ရပ်မျိုးတွေနဲ့ နာမည်မကြီးချင်ပါနဲ့ကွာ ။
မင်းလုပ်လိုက်တဲ့ လုပ်ရပ်ကြောင့် မဟုတ်တာတွေကိုမှအတုခိုးတတ်ကြတဲ့ အခုခေတ် လူငယ်မျိုးဆက်တွေက မင်းလိုဘဲ ကိုယ့်ရိုးရာဝတ်စုံကို တန်းဖိုးမထားတတ် ဘဲဖြစ်ကုန်ရင်တော့ ???စဉ်းစားသာကြည့်တော့ ??? လူကျင့်ဝတ်အရ နာမည်ထည့်မရေးတာနော် မြန်မာတို့ ရိုးရာ ယဉ်ကျေးမှု ထိုင်မသိမ်း ဝတ်စုံအား ယခုကဲ့သို့ သရုပ်ပျက် ဖက်ရှင် ဒီဇိုင်းပြုလုပ်သည့် ထိုသရုပ်ဆောင် မဟုတ် ဘာမဟုတ် ညာမဟုတ် ဆိုသူအား ပြင်းထန်စွာ ကန့်ကွက်ပါသည်။ ကောင်းကျော် လူရွှင်တော်” ဆိုပြီး အဆိုပါ ဆယ်လီရဲ့ပုံနဲ့အတူ ပြင်းပြင်းထန်ထန် ရှုံ့ချထားတာပါ။
ပရိသတ်တွေရော မြန်မာ့ထိုင်မသိမ်းကို ဖျက်ဆီးလို့ စိတ်တိုနေတဲ့ ကောင်းကျော်ရဲ့အမြင်ကို ဘယ်လိုထင်မြင်မိလဲဆိုတာ ပြောသွားခဲ့ကြပါဦးနော်။
ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်တစ်ဦးက သုံးသပ်ပြခဲ့တဲ့ Ku Hye Sun ရဲ့ စိတ်ကျန်းမာရေးအခြေအနေ
“သမုဒ္ဒယရင်ခွင် ပရဟိတအဖွဲ့နှင့်အတူ မွန်ပြည်နယ် ရေဘေးသင့်ပြည်သူများအတွက် ကိုယ်တိုင်သွားရောက်လှူဒါန်းခဲ့တဲ့ ရွှေပိုးအိမ်”